အာယာသွလ္လာဟ် ရှဟီးဒ် ဒက်စ်သဂိုင်ဗ် ရှီးရာဇီး ၏ ဂိုနာဟာရေ ကဘီရာ စာအုပ်မှ အချို့ ကောက်နုတ်ချက်များ အပိုင်း (၂)
နိုဝငျဘာ ၉, ၂၀၂၁ - ၁၁:၅၈ ညနေ News Code : 1197238 Source : ABNA Link:
အာယာသွလ္လာဟ် ရှဟီးဒ် ဒက်စ်သဂိုင်ဗ် ရှီးရာဇီး ၏ ဂိုနာဟာရေ ကဘီရာ စာအုပ်မှ အချို့ ကောက်နုတ်ချက်များ အပိုင်း (၂) အား တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
အဲဟ်လေ့ဘိုက် (သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ် ) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
ရှဖာအသ်သည် မျှော်လင့်ချက်ကို ဖြစ်စေပါသည်။ မာန်မာန ထောင်လွှား မှုကို မဖြစ်စေပါ
ပြီးခဲ့သည့် တင်ပြချက်များ အရ ရှာဖာအသ် ဆိုသည့် ခေါင်းစဉ် သည်မာန်မာန ထောင်လွှား ခြင်းနှင့် အမိန့် မနာခံခြင်း ၏ သတ္တိ ကို ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းခံ မဖြစ်သင့် ချေ။ တစ်နည်း အားဖြင့် အပြစ်ရှိသူများ အတွက် ရှဖာအသ် သည် မျှော်လင့်ချက် ကင်းမဲ့နေသည့် အချိန်တွင် မျှော်လင့် ချက် ကို အားကောင်း စေပါသည်။ မနုဿာ လူသား အား သောင်ဗာ ပြုခြင်း နှင့် နောင်တ ရခြင်း ဘက်သို့ ဝါသနာ ကို ဖြစ်စေပြီး ဆွဲဆောင်စေပါသည်။ ထိုမှသာ မြင့်မားသည့် အဆင့် အတန်းကို ရောက်ရှိ ရန် ဖြစ်ပါသည်။ သောင်ဗာ ပြုမည်သူ ၊ နောင်တ ရသူသည် သောင်ဗာ လမ်း ပြီးနောက် နောင်တ ရခြင်း ၊ ကောင်းမှု ကုသိုလ်များပြုခြင်း ၊ အဲဟ်လေ့ ဘိုက်(သ) အသွာဟာရ် (အ.စ) ၏ ရှဖာအသ် (ခ) အသနား ခံလျှောက်ထားပေးမှု ရမည်ဆို သည့် မျှော်လင့်ချက် ဖြင့် မြင့်မား သည့် နေရာကို ရအောင် စကြာဝဠာ အပေါင်းကို ပြုစု ပျိုးထောင်တော်မူသည့် အရှင် မြတ်၏ နီးကပ်မှုကို ရအောင် ကြိုးစား ရပါ မည်။
တစ်ဖက်တွင် ရှဖာအသ် ၏ မျှော်လင့်ချက် အခြား တစ်ဖက်တွင် ပေါ့ဆမှု ပေါ့ပျက်မှု မရှိရန် လိုအပ်ပါ သည်။ ရှဖာအသ် ၏ မျှော်လင့်ချက် နှင့်အတူ နှလုံးသားတွင် အလ္လာဟ် ဟိုအရှင်မြတ် ၏ကြောက်ရွံ့ ခြင်း လည်းရှိရန် အရေးကြီး ပါသည်။ အကြောင်းမှာ ကြောက်ရွံ့ခြင်းသည် ရှဖာအသ် နှင့် မဆန့်ကျင်ပေ။ ဆိုလိုသည်မှာ အကြင် မည်သူမဆို အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် ၏ ကျေးဇူးတော် နှင့် ရှဖာအသ် မျှော်လင့်ချက် ထားမည်ဆိုလျှင် ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နိုင်ပါ သည်။ ဤအခြေအနေတွင် ၎င်းအား ကြောက်ရွံ့ ထိတ်လန့် ခြင်း ကိုခံစားရ ပေမည်။ ဤကဲ့သို့ မဟုတ်လျှင် အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် မလုပ်ပါစေနှင့် မိမိတို့ သခင်များ ၏ ရှဖာအသ် ၎င်းတို့ အားအလွန် ရှည်လျား သည့် ကာလ တစ်ခု ပြီးမှာ ရရှိသည်မျိုး မဖြစ်ပါစေနှင့်။ နောက် တစ်နည်း ပြောရ မျိုးဆို လျှင် ၎င်းအနေဖြင့် ရှည်လျားသည့် ကာလ အထိ ဗရ်ဇက်ခ် ဘဝတွင် အပြစ်ဒဏ်များ ကို ခံရပြီးမှ ရှဖာအသ် ရမည် ဖြစ်ပါ သည်။ ပြီးနောက် တစ်ချိန် တည်းမှာပင် ကြောက်ရွံ့ ထိတ်လိန့် သည်လည်းပဲ အဲဟ်လေ့ ဘိုက်(အ.စ) ၏ နှင့် အမြောက်အများ အပြင်းအထန် သဝစိုလ် လုပ်ခြင်းကို ဖြစ်စေ ပါမည်။
အဲဟ်လေ့ဘိုက် (အ.စ) ၏ ရှီအာ များ
ရှီအာများ ၏ အဆင့်အတန်းနှင့် အဲဟ်လေ့ ဘိုက် (အ.စ) အား အချစ်ထားသူများ၏ နေဂျသ် (ခ) လွှတ် မြောက် မှု နှင့် ပတ်သက်ပြီး ရီဝါယသ် တော် များ ကျနော်တို့ထံရောက်ရှိ ပါသည်။ ၎င်း ရီဝါယသ်တော်များ မှ တစ်ခု မှ ဤကဲ့သို့ ဖြစ်ပါ သည်။ ရှီအာများကို ဂျဟန္နမ် (ခ) ငရဲမီးမှ လောင်းကျွမ်း နိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ ထိုကြောင့် ဤကဲ့သို့သော် ရီဝါယသ်တော် များ သည် ကျွန်ုပ် ၏ မျှော်လင့်ချက် ကို အားကောင်း စေပြီး စိတ်ချ ရမှု ကို ဖြစ်စေ ပါသည်။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့ ၏ မျှော်လင့် ချက် နှင့် စိတ်ချ ရမှု သည် အပြစ်ဂိုနာများ ပြုလုပ်ရန် သတ္တိ ဆိုသည့် အကြောင်းခံ တော့ မလွဲမသွေ မဖြစ်ဖို့ လိုပါသည်။
ရှီအာ နှင့် အချစ်မေတ္တာ
ဤခေါင်းစဉ် နှင့်ပတ်သက်သည့် ရီဝါယသ်တော်များ သည် ခေါင်းစဉ် နှစ်ခု အဖြစ်ရှိပါသည်။ ပထမခေါင်းစဉ်မှာ ရှီအာ ဖြစ်ပြီး နောက်တစ်ခု မှ အဲဟ့်လေ ဘိုက် (အ.စ) အား အချစ်မေတ္တာ ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ရှီအာများ ၏ နေရာ နှင့် အဆင့် အတန်းဖြစ်ပါသည်။ အကြောင်းမှာ ၎င်းတို့ သည် ပညာနှင့်လုပ်ဆောင်မှု ဆိုသည့် နယ်ပယ်တွင် တိုးတက်မှု ကို ဆွတ်ခူး ထားသည့် အတွက်ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ဤသို့ဖြစ် လျက် ၎င်းတို့သည် မိမိတို့ မိမိ အား အဲဟ့်လေ ဘိုက် (အ.စ) ၏ ရှီအာဆိုပြီး သတ်မှတ် ပြောဆိုရန် မထိုက်ဟုတ် သဘော ပေါက်ထားကြပါသည်။ ပမာအားဖြင့် မိုဟမ္မဒ်ဗင် မွတ်စလင်မ် စကဖီ ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းသည် အေမာမ် မိုဟမ္မဒ် ဗကဲရ် (အ.စ) နှင့် အေမာမ် ဂျအ်ဖရ်ဆွာဒစ် (အ.စ) နှစ်ပါး ၏ ဂုဏ်သိက္ခာ နှင့် ပြည့်စုံပြီး ကျော်ကြားသည့် သာဝကတော်များ မှ ဖြစ်ပါ သည်။ ၎င်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဤ အေမာမ် နှစ်ပါးစလုံးမှ ရှီအာ များ ကို အမိန့်ပေးထားခဲ့ပါသည်။ သာသနာ ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ တွင် ၎င်းဘက်သို့ ဦးလှည့်ကြရန် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအပြင် အေလ်မေ ရေဂျာကျမ်း (ဟဒီးစ် တော်ဆင့်ပြသူများ ၏ ကိုယ် ရေး ရာဇဝင် ပြသည့်ကျမ်း) တွင် မိမိ ခေတ် ကာလတွင် မိုဟမ္မဒ်ဗင် မွတ်စလင်မ် စကဖီ ထက် ကြီး သည် ဖကီးဟ်(ခ) ဓမ္မသတ် ပညာရှင်မရှိဟု ရေးသား ထားပါ သည်။
မိုဟမ္မဒ် ဗင်မွတ်စလင်မ် နှင့် ဃာဇီ ရှရီးက် တို့ ၏စကား ဝိုင်း
တစ်ကြိမ် တစ်ခါ ဤ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး (မိုဟမ္မဒ် ) ဗင် မွတ် စလင်မ် သည် အဘူ ကရီဗသိုလ်အဇ်ဒီ နှင့်အတူ ဃဇီ ရှရီးက် ထံ ရောက် ရှိကြလေ၏။ ရှရီးက် မှ ၎င်းတို့ အား ဒေါသ အကြည့်နှင့် ကြည့် ပြီး ပြောလေ၏။ သူတို့ နှစ်ဦးစလုံးသည် ဂျအ်ဖရီ နှင့် ဖွာတွေမီ ဖြစ်ကြပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ အဲဟ်လေ့ဘိုက် (အ.စ) ၏ ရှီအာ ဖြစ်သည်။ ဤပြောသံ ကို ကြားလျှင်ကြားခြင်း နှစ်ယောက် စလုံး ငို ကြလေ၏။ ဃာဇီ မှ ၎င်းတို့နှစ် ဦး အား ငို ရသည့် အကြောင်း ကို မေးမြန်းလေ၏။ ထို အခါ ဖြေကြား လေ၏။ လူကြီးမင်း အနေဖြင့် ကျနော်တို့ အား အလွန်တရာ ကြီးကျယ် မြင့်မြတ် သည့် ပုဂ္ဂိုလ် (ဟဇရသ် အေမာမ် ဂျအ်ဖရ်ဗင် မိုဟမ္မဒ် အလ် ဆွာဒစ် (အ.စ) ) ရှီအာ ဖြစ်ကြောင်း ပြောလေ၏။ ကျွန်ုပ်တို့ ကဲ့သို့ ဇိုဟ်ဒ် (လောကကို မမက်မော်ခြင်း) နှင့် သက္က်ဝါ (သီလ၊ သမာဓိ) နည်းသည့် သူများ ကို အလွန်တရာ ကြီးကျယ် မြင့်မြတ် သည့် ပုဂ္ဂိုလ် ၏ ရှီအာ ဟု ဆိုသည့် အတွက် သဘောမတူပါ။ ကျေးဇူး ပြုပြီး ကျနော်တို့၏ တင်ပြမှု ကိုလက်ခံ ပေးပါ။ ကျတော် တို့ အပေါ် ကျေးဇူး ရှိခြင်း ဖြစ်ပါမည်။
ရှီအာ အစ်အမှန် သည် အေမာမ် ၏ အမိန့်ကို လိုက်နာ ကျင့်သုံး လေ၏
မှန်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် စစ်မှန်သည့် ရှီအာ ၊ ရှီအာ အစစ် အဖြစ် ကိုယ်ကျင့်တရား နှင့် အပြော အဆို အားလုံး အေမာမ် (အ.စ) ၏အမိန့်ကို နားခံကျင့်သုံး လိုက်နာ သူကိုမှ ပြောလိုရပါမည်။ ဤအတွက်ကြောင့် ဟဇရသ် အေမာမ် မူစာ ဗင် ဂျအ်ဖရ် (အ.စ) မှ မိန့်တော်မူထားပါသည်။
اِنَّمَا شِیْعَتُنَا مَنْ شَیّعَنَا وَاتَبَعَ آثارَنا وَ اقْتَدَیٰ بِاَعْمَالِنَا.(بحارالانوار)
ကျွန်ုပ်တို့၏ ရှီအာဆိုသည်မှ (ရှိသမျှအချိန် တိုင်း တွင်) ကျွန်ုပ်တို့၏ အမိန့်များ လိုက်နာ ကျင့်သုံး ခြင်း၊ ကျွန်ုပ် တို့ ၏ ခြေလှမ်း အတိုင်းလှမ်းခြင်း ကျွန်ုပ် လုပ်ဆောင်ချက်များ အတိုင်း လုပ် ဆောင် ခြင်း မှ အပဘာမှ မလုပ်ဆောင်ချေ။
အချို့ ရှီအာများ နှင့် ဟဇရသ် အလီ (အ.စ) ၏ စကား ဝိုင်း
တစ်ည ဟဇရသ် အမီးရွလ် မိုအ်မေနီ အေမာမ် အလီ (အ.စ) ဗလီ ဝတ်ကျောင်းတော်မှ အပြင် သို့ ကြွမြန်း တော်မူ လေ၏။ လပြည့်ည ဖြစ်သည့် အတွင် ထင်ရှား စွာ မြင်တွေ့ နိုင်ပါသည်။ မောင်လာ (အ.စ) အနေဖြင့် နောက်ပြန် လှည့် ကြည်တော် မူသည်အခါ ကိုယ်တော်နောက်သို့ အုပ်စု တစ်စု လိုက်လာ နေသည်ကို တွေ့ရလေ၏။ မောင်အလီ (အ.စ) မိန့်တော် မူလေ၏ ။ အသင်တို့ သည် မည်သူ မည်ဝါများ ဖြစ်ကြပါသ နည်း? အဖြေ ပေး လျှောက်ကြ လေ၏ ။ ကျနော် တို့သည် လူကြီးမင်း၏ ရှီအာ (နောက်လိုက် ) များ ဖြစ်ပါ သည်။ မောင်လာ အလီ (အ.စ) မှ ၎င်းတို့၏ မျက်နှာ များ အား အသေ အချာ ဂရုပြု ကြည့်ပြီးနောက် မိန့်တော်မူလေ၏။ အဘယ်ကြောင့် အသင်တို့၏ မျက်နှာ များ တွင် ရှီအာ ၏ အမှတ် အသား လက္ခဏာ တစ်ခု မျှ မပါရှိရပါသနည်း ?
ပြန်လည် လျှောက်ထားလေ၏။ ရှီအာများ ၏ အမှတ် အသား လက္ခဏာ များ သည် မည်သည့် အရာများ ဖြစ်ပါသနည်း ? အဖြေ ပေးမိန့်လေ၏။
صَفَرَالْوُجُوْهُ مِنَ الْسَّهَرِ، عَمَشَ الْعُیُوْنُ مِنَ الْبُکَاءِ، حَدَبُ الظُّهُوْرُ مِنَ الْقِیَامِ، خَمَصُ البُطُوْنُ مِنَ الصِّیَامِ ذَبَلَ الشِّفَاةُ مِن الدُّعَاءِ، عَلَیْهِمْ غَبَرَةُ الْخَاشِعِیْنَ.
အဓိပ္ပာယ်။ ။ အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ် ၏ အေဗါဒသ် အား များသော အားဖြင့် ညလုံးပေါက် ပြုသည့် အတွက် ၎င်းတို့၏ မျက်နှာများ ၏ အရောင် သည် အဝါရောင် သန်နေပါသည်။ အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် အား ကြောက်ရွံ့ သည့် အတွက် အမြောက်အများငိုကြွေး သည့် အတွက် ကြောင့် မျက်လုံးများ အား နည်း သွား၍ မျက်ရည် ထွက်ပါ သည်။ အေဗါဒသ် တွင် ရပ်၍ ပြု လုပ် သည့် အတွက် ၎င်းတို့၏ ခါးများ သည် ကိုင်းညွှတ်သွား လေ သည်။ ရိုဇာ ထားသည့် အတွက်ကြောင့် ၎င်းတို့၏ ဝမ်းဗိုက် နှင့် ကျော တစ်ထပ် တည်း ဖြစ်နေပါသည်။ ဒိုအာ အမြောက် အများ တောင်းဆိုသည့် အတွက် ၎င်းတို့ ၏ နှုတ်ခမ်း သည် ခြောက် သွေ့ နေသည်။ အလ္လာဟ်ဟို အရှင် မြတ် ၏ ကြောက်စိတ် လွမ်းမိုး နေပါသည်။ နောက်ထပ် အချက် အလက်များ အတွက် ရီဝါယသ် တော် သုံးခု ကို တင်ပြ လျှင် လုံလောက် ပါပြီး။
ရှီအာဖြစ်ကြောင်း နှုတ်နှင့်ပြောယုံဖြင့် မလုံ လောက် ချေ။
ပထမ ရီဝါယသ် တော်
عَنْ جَابِرٍ عن اَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ اَیَکْتَفِیْ مَنْ یَنْتَحِلُ التَشَیُّعَ اَن یَقُوْلَ بِحُبِنَا اَهْلَ الْبَیْتِ فَوَاللّٰهِ مَامِنْ شِیْعَتِنَا اِلاَّ مَنْ اِتَّقِ اللّٰهَ وَاطَاعَه . (( کتاب کافیج ۲ ص ۶۰ ))
အဓိပ္ပာယ်။ ။ ဂျနာဗေ ဂျဗေရ် (ရ.သွ) မှ အေမာမ် မိုဟမ္မဒ် ဘာကဲရ် (အ.စ) တဆင့် တင်ပြပါသည်။ အေမာမ် မိုဟမ္မဒ် ဘာကဲရ် (အ.စ) မိန့်တော် မူ သည်။ တစ်ဦး တစ်ယောက် အတွက် မိမိ ရှိအာ ဖြစ် ကြောင်း ပြောပြီး ကျနော်သည် အဲဟ်လေ့ဘိုက် (အ.စ) အချစ်ထား သူ ဖြစ်သူဟု ပြောလျှင် လုံ လောက် ပါ သလား? အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် အား ကျိန်ဆို ပါ၏။ ကျွန်ုပ် ၏ ရှီအာ သည် အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် အား ကြောက်ရွံ့ ပြီး ၎င်း အရှင်မြတ် ၏ အဲဟ်ကာမ် (ခ) အမိန့် ဥပဒေများ ကို လိုက်နာ သူမှ အပ အခြား မည်သူမျှ မဖြစ်နိုင်ချေ။
ရှီအာသည် အားလုံးထက် ဂိုနာများကို ရှောင်ကြဉ်သူ နှင့် အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ်ကို ပို၍ ကြောက်သူ ဖြစ် ပါသည်။
ဒုတိယ ရီဝါယသ် တော်
عَنْ مُفْضِّلْ بِن عَمَر قَالَ قَالَ اَبُوْعَبْدِاللّٰهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ اِذَا اَرَدْتَ اَنْ تَعْرِفَ اَصْحَابِی فَانظُرْ اِلٰی مَنْ اِشْتَدَّ وَرَعَه وَخافَ خالِقَه وَرَجَا ثَوَابَهُ وَاِذَا رَاَیْتَ هٰولآءِ فَهٰولآءِ اَصْحَابِیْ. (( کتاب کافی))
အဓိပ္ပာယ်။ ။ဟဇရသ် အေမာမ် ဂျအ်ဖရ်ဆွာဒစ် (အ.စ) မှ မိုဖွဆွလ် လ်ဗင် အိုမရ် အားမိန့်တော်မူ လေ ၏။ အကယ်၍ အသင် အနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ သာဝက တော်များ ကို သိချင်လျှင် ထိုသူကို ကြည့်ပါ လေ။ ထိုသူသည် အခက်အခဲ နှင့် အတူ ဂိုနာများ ကို ရှောင်ကြဉ်သူ ဖြစ်၏။ မိမိ၏ ဖန်ဆင်း ရှင် အား အလွန်ပင် ကြောက်ရွံ့ သူဖြစ်ပါသည်။ အရှင်မြတ် ထံ မှ စဝါးဗ် ကို မျှော်လင့်သူ ဖြစ်ပါသည်။ အသင် အနေဖြင့် ဤကဲ့သို့သော် သူများ ကို မည်သည့် နေရာ တွင်မဆို တွေ့ခဲ့လျှင်သိ ထားလိုက်ပါလေ။ ဤသူ များသည် ကျွန်ုပ် ၏ သာဝက တော်များ ဖြစ်ပါသည်။
တတိယ ရီဝါယသ် တော်
دَخَلَ عِیْسیٰ بْنُ عَبْدِاللّٰهِ القُمّی اِلٰی ابی عَبْدِاللّٰه (ع) فَقَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ لَیْسَ مِنَّا وَلاَکَرَامَةَ مَنْ کَانَ فِیْ مِصْرٍ فِیْهِ مِأَ اَلفٍ اَوْیَزِیْدُوْنَ وَکَانَ فِیْ ذٰالِکَ الْمِصْرِ اَحَدُاَوْرَعُ مِنْه.
(( کتاب کافیج ۲ ح۱۰ باب الورع ))
ဂျနာဗ် အီစာ ဗင် အဗ်ဒိုလစ်လ္လာဟ် ကွမ်းမီ သည် ဟဇရသ် အဘီအဗ်ဒိုလ္လာဟ် (ခ) အေမာမ် ဂျအ်ဖရ် ဆွာဒစ် (အ.စ) ထံ တွင် အခစား ဝင်လေ၏။ ထိုအခါ အေမာမ် ဂျအ်ဖရ်ဆွာဒစ် (အ.စ) မိန့်တော် မူလေ၏။ ထို ပုဂ္ဂိုလ် သည် ကျွန်ုပ်တို့ မှ မဟုတ်ချေ။ ထိုပြင် ကျွန်ုပ် အနီးတွင် ဂုဏ်သိက္ခာ မရှိချေ။ မည်သည်မြို့တွင် မဆို လူ တစ်သိန်း နေထိုင်မည်။ ပြီးထိုနေရာမှ (ရှီအာမဟုတ်သည့် ) လူတစ် ဦးတစ်ယောက် သည် ၎င်း ထက်ပိုမို၍ အပြစ် ဂိုနာများ ကို ရှောင်ကြဉ်မည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် အဲဟ်လေ့ဘိုက် (အ.စ) ၏ ရှီအာ သည် အီမာန် ၊ လုပ်ဆောင်ချက် နှင့် သက္က်ဝါ တွင် အားလုံးထက် ပိုမို၍ ကောင်းသင့်ပြီး သူနှင့် ယှဉ်ဖို့ မရှိဖြစ်ရပါမည်။ ဤအတွက် ကြောင့် အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် သည် မိမိ နှုတ်ကပတ်တော် တွင် ဤကဲ့သို့သူ အား ခိုင်ရွလ်ဗရီယဟ် (ခ) အဖန်ဆင်းခံများ တွင် အကောင်းတကာ အကောင်းဆုံး သူများ ဟု အမည်မှည့် ထား လေ၏။
اِنَّ الَّذِیْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُوْلٰئِکَ هُمْ خَیْرُ الْبَرِیَّةِ .
အဓိပ္ပာယ် ။ ။ ဧကန် မုချ အကြင်သူများသည် အီမာန် သက်ဝင် ယုံကြည်ကြပြီး ကောင်းမြတ်သည့် အလုပ်များကို လုပ်ဆောင် ကြပါသည်။ ဤသူများသည် အဖန်ဆင်းခံများ တွင် အကောင်း တကာအကောင်းဆုံး သူများဖြစ်ကြပါသည်။ ပြီးနောက် မဟာတမန်တော်မြတ် ကြီး မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) ထံ ဤကဲ့သို့ ရီဝါယသ်တော်လာရှိပါသည်။ခိုင်ရွလ်ဗရီယဟ် ဆိုသည်မှာ ဟဇရသ် အမီးရွလ် မိုအ်မေနီ အလီအစ်ဗ် နေ အဘီ သွာလစ်ဗ် (အ.စ) ၏ ရှီအာ များ ဖြစ် ကြောင်း ဖြစ်ပါ သည်။ ဤ အတွက် ကြောင့် မိန့်တော် မူလေ၏။
تَاْتِیْ اَنْتَ وَشِیْعَتُکَ یَوْمَ الْقِیَامَة، رَاضِیْنَ مَرْضِیْنَ . (تفسیر طبری مناقب خوارزمی۔ الصواعق۔ تالیف ابن حجر)
အဓိပ္ပာယ် ။ ။ အို … အလီ (အ.စ) ခိုင်ရွလ်ဗရီယဟ် ဆိုသည် မှာ အသင် နှင့် အသင်၏ နောက်လိုက် ရှီအာ ဖြစ်ပါသည်။ ကေယာမသ် နေ့ တွင် အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် ၎င်းတို့အား ချီးမြှင့် ပေးသနားတော်မူသမျှ ကို သဘောတူ ကြမည်။ ပြီးနောက် ပျော်ရွှင်နေသည့် အခြေအနေတွင် ရှိကြမည်။ ပြီး နောက် ၎င်းတို့သည် အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် နှစ်သက် မြတ် နိုး သူများ ဖြစ်ကြပါမည်။
ဤကိစ္စတွင် မည်သည့် သံသယ ဒွိဟမျှ မရှိချေ။ အကြင်မည်သူမဆို အဲဟ်လေ့ဘိုက် အသွဟာရ် (အ.စ) ၏ ဝေလာယသ် ကို ရရှိထားမည်ဆိုလျှင် ထိုလွတ်မြောက်ရန် ထိုက်တန် သူ ဖြစ်ပါသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် နဘီ တမန် တော်မြတ်များ (အ.စ) နှင့် အေမာမ် ၁၂ပါး နှင့် အတူ ရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဤအတွက်ကြောင့် အေမာမ် ရေဇာ (အ.စ) မှ မိန့်ကြားတော် မူ၏ ။
حَقٌ عَلٰی اللّٰهِ اَنْ یَبْعَثَ وَلِیَّنَا مُشْرِقًا وَجْهُهُ نَیِّراً بُرْهَانُهُ ظَاهِرَةً عِنْدَاللّٰهِ حُجَّتُهُ، حَقٌّ عَلٰی اللّٰهِ تَعَالٰی اَنْ یَّجْعَلَ وَلِیَّنَا مَعَ النبییّنَ وَالصِّدِّیْقِیْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصّٰلِحِیْنَ وَحَسْنَ اُوْلٰئِکَ رَفِیْقًا.(بحارالانوار)
အဓိပ္ပာယ် ။ ။ကျွန်ုပ်တို့၏ အချစ်တော်များ ကို ကေယာမသ် နေ့ တွင်၎င်းတို့၏ မျက်နှာများသည် ချောမောလှပ သည့် အတွက် ကြောင့် တောက်ပြောင် နေသည့် အနေအထားတွင် ထမြောက် အောင်ပြုတော်မူမည်မှာ မြတ်အလ္လာဟ် ၏ တာဝန် ဖြစ်ပါသည်။ ဤ အတွက် အထောက်အထား မှာ ရှင်းလင်း ပြတ် သားပြီး ဤ အတွက် ဟွဂ်ျဂျသ် (ခ) မှတ် ကျောက် မှာ အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် ၏ အနီးတွင် ထင်ရှား ပါသည်။ အလ္လာဟ် ဟို အရှင်မြတ် ၏ တာဝန် ဖြစ်ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ အချစ်တော်များ ( ဝေလာယသ် ကို လက်ခံထားသူများ) အား ကေယာမသ် န့ တွင် နဘီ တမန် တော်မြတ်များ (အ.စ) ၊ ရှဟီးဒ်တော်များ ၊ ဆစ်ဒီကီး (လိမ်လည် မပြောဆိုသူများ) နှင့် အတူ ရှင်ပြန် ထမြောက်စေမည်။ ပြီးနောက် ဤ ပုဂ္ဂိုလ်များ သည် အကောင်း တကာ အကောင်းဆုံး မိတ်ဆွေ များ ဖြစ်ကြပါသည်။
သို့သော် မလွဲမသွေ ဝေလာယသ် ၏ အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုချက် ဘာလဲ ဆိုတာ ကို သိထားရပါမည်
မဂ်ျမအိုလ်ဗဲဟ်ရိန်း ကျမ်းတွင် ဝေလာယသ် ၏ အဘိဓာန် ဆိုင်ရာ အဓိပ္ပာယ် နှင့်ပတ်သက်ပြီးရေး သားထား ပါသည်။
اَلْوَلاَیَةُ بِالْفَتْحِ؛ مَجَبَّةُ اَهْلَ الْبَیْت عَلَیْهِمُ السَّلاَ مُ وَاِتّبَاعُهُمْ فِیْ الدِّیْن وَامْتِثَالُ اَوْامِرِ هِمْ وَانَوَاهِیهِمْ وَالتَّاَسِّیْ بِهِمْ فِی الْاَعْمَالِ وَالْاَخْلاَقِ.
အဓိပ္ပာယ် ။ ။ဝေလာယသ် ဆိုသည့် စကားလုံးသည် ဇဲဗရ် နှင့် ဆိုလျှင် အဲဟ်လေ့ဘိုက် (အ.စ) အားချစ်ခင်ခြင်း နှင့် သာသနာ ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များတွင် ၎င်း အဲဟ်လေ့ဘိုက် (အ.စ) ၏ နောက် လိုက်နာ ခြင်း နှင့် လုပ်ရ မည့်ဟုအရာ များကို လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်သည့်အတိုင်း လုပ်ဆောင်ခြင်း ပြီးနောက် တားမြစ် ပိတ်ပင် ထားသည့် အရာများ ကို ရှောင်ကြဉ်ခြင်း ဝေးဝေး နေခြင်း လုပ်ရပ်များ နှင့် ကိုယ်ကျင့် တရား များ တွင် အဲဟ်လေ့ဘိုက် (အ.စ)၏ ခြေလှမ်း အတိုင်း လှမ်း ခြင်း ကို ဝေလာယသ် ဟုခေါ်ဆိုပါ သည်။ ဝေလာယသ် ၏ ဤ အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုက်ချက် ဖြင့် ထင်ရှားပါသည်။ ဝေလာယသ် ဆိုသည်မှာ သီးသန့် အချစ် နှင့် လိုက်နာ ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဤအဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုချက် အတွက်သက်သေ အထောက် အထား မှာ ဂျနာဗ် ဇိုရာရဟ် ၏ အေမာမ် မိုဟမ္မဒ် ဘာကဲရ် (အ.စ) ထံမှ ဆင့်ပြန်သည့် ဟဒီးစ်တော် ဖြစ်ပါ သည်။ ထိုဟဒီးစ်တော် တွင် အေမာမ် (အ.စ) မှ ဝေလာယသ် အား လိုက်နာခြင်း ဖြင့် မှည့်ခေါ် ထားပါသည်။
ဟဇရသ် အလီ (အ.စ) ၏ ဝေလာယသ်သည် အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် ၏ ခိုင်မာသည့် ခံတပ် ဖြစ်၏
ဤအဓိပ္ပာယ် အား စေလ်စလသွဇ်ဇဟဗ် ဆိုသည့် ဟဒီးစ် တော် မှ အသုံးပြု ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဆူဒူက် (ရ.ဟ) မှ အေမာမ် ရေဇာ (အ.စ) ထံမှ ဆင့်ပြန် ထားပါ သည်။ ၎င်း၏ စာသား မှာ ဤကဲ့သို့ ဖြစ်ပါသည်။
قَالَ اللّٰهُ تَعالٰی وَلاَیَةُ عَلِیّ بِن اَبیْطَالِبٍ حِصْنِیٍ فَمَنْ دَخَلَ فِی حِصْنِیْ اَمِنَ مِنْ عَذَابِیْ. (عیون اخبار الرضا علیه السّلام)
အဓိပ္ပာယ် ။ ။အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် မိန့်တော်မူသည်။ အလီ အစ်ဗ်နေအဘီသွာလစ်ဗ် (အ.စ) ၏ ဝေလာယသ် ကျွန်ုပ်၏ ခံတပ် ဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အကြင်မည်သူမဆို ကျွန်ုပ်၏ ခံတပ်တွင် ဝင်ရောက် လာသူသည် ကျွန်ုပ် ၏ပြစ်ဒဏ် မှ လုံခြုံ ပေမည်။
ဒွိဟ၊သံသယ မရှိပါ။ အဲဟ်လေ့ဘိုက် အစ်ဆွမသ် ဝ သွဟာ ရသ် (အ.စ) ၏ ဝေလာယသ် ၏ ခံတပ် တွင် ဝင် ရောက်သည်ဆိုသည်ရည်ရွယ်ချက်မှာ ရှိုင်တွာန် (ခ) မာရ်နတ် နှင့် စိတ်အလိုဆန္ဒများ ၏နောက်လိုက်ခြင်းမှ ရှောင်ပြေးခြင်း နှင့် အဲဟ်လေ့ဘိုက် (အ.စ) ၏ ရန်သူများ နှင့် ဝေးဝေးနေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ပြီးနောက် အဲဟ်လေ့ဘိုက် (အ.စ) ထံ ခိုလှုံမှု ကိုရယူခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အနှစ်ချုပ်ဆိုရလျှင် ဤသို့ဖြစ်ပါ သည်။ ရှိသမျှ လုပ်ဆောင်ချက်များ အားလုံး နှင့် ပြောဆိုချက် များ အားလုံး တွင် ဤကြီးကျယ်မြင့်မြတ်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်ထူးများ (ခ) အဲဟ်လေ့ဘိုက်(အ.စ) ၏ နောက်လိုက် ဖြစ်ဖို့ လိုအပ် ပါသည်။ تَحصُّن (ခိုင်မာသည့် ခံတပ်တွင် ခိုလှုံခြင်း) ဆို သည့် စကားလုံး သည်စကားလုံး အဖြစ်သာမဟုတ်ဘဲ လုပ်ဆောင် ချက်၊လုပ်ရပ် ဖြင့် အဲဟ်လေ့ဘိုက်(အ.စ) ထံခိုလှုံမှု ကို ရယူ သင့်ပါသည်။ အကြောင်းမှာ အကြင်မည်သူ မဆို ထိုသူတစ်ဦး တစ်ယောက်၏ နောက်လိုက်ခြင်းသည် အမှန်တကယ် ၎င်း၏ ခံတပ် တွင် ခိုလှုံ ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ထိုအတွက်ကြောင့် အကြင် မည်သူမဆိုဂိုနာ (ခ) အပြစ် ပြုလုပ်မည်ဆိုလျှင်၎င်း၏ ဂိုနာ (ခ) အပြစ် ကျူးလွန် နေသည့် အခြေအနေ တွင် အေမာမ် အလီ (အ.စ) ၏ ခံတပ်မှ ထွက်သွားပေသည်။ နဖ်စေ အမာရဟ် နှင့် ရှိုင်တွာန် ၏ ထောက်ချောက်တွင် ပိတ်မိ သွား ပါသည်။
သားရဲတိရစ္ဆာန် ခြင်္သေ့မှ လွတ်မြောက်ရန် ရဲတိုက်တွင် ခိုလှုံခြင်း
သာသနာပညာရှင် အကြီးအကဲများ ဆိုဆုံးမ စကား ဖြစ် ပါသည်။အကြင်မည်သူ မဆို နှုတ်လျှာ မှ အအူဇိုဗစ် လ္လာဟ်မေ နရှ် ရှိုင်တွာန် နေရဂျီးမ် (အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ်ထံ တွင် နှင်းထုတ်ခြင်း ခံထားသည့် ရှိုင်တွာန် (ခ) မာရ်နတ် ၏ အန္တရာယ် အသွယ်သွယ်မှ လွတ်မြောက်ရန် ခိုလှုံ ပါ၏။ ) ပြောဆိုမည်။ သို့သော် လက်တွေ့ ကျင့်သုံးမှု တွင် ရှိုင်တွာန် (ခ) မာရ်နတ် ၏ နောက် ဘဲ လိုက်နေမည် ဆိုလျှင် သားရဲ တိရစ္ဆာန် ခြင်္သေ့ ၏ခြေတွင် သားကောင် ကို ထိုင်ခဲ့သူနှင့်ပမာတူပေမည်။ ၎င်း၏ခြေတွင် ရဲတိုက် (သို့) ခံတပ် တစ်ခု ရှိမည်။ပြီးနောက် ၎င်းအနေဖြင့် ခြင်္သေ့ အား ပြောမည်။ (( အကယ်၍ အသင် တိုက်ခိုက် မည်ဆိုလျှင် ကျွန်ုပ် ဤ ခံတပ် (သို့) ရဲတိုက်တွင် ခိုလှုံယူလိုက်မည်ဖြစ်ပါသည်။ )) အန္တရာယ် ရှိလျက် ၎င်း အနေဖြင့် မိမိ နေရာ မှ မလှုပ်ဘဲ ခံတပ် အတွင်း သို့ လည်း မဝင်မည်။နောက်ဆုံး ခြင်္သေ့ သည် ၎င်းကို ကိုက်သတ် လိုက်မှာ ဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ ၎င်းအနေဖြင့် အမြန်ဆုံး ကြိုးစား ပြီးခံတပ် (သို့) ရဲတိုက် အတွင်းသို့ ဝင်ရောက် ခိုလှုံမည်ဆိုလျှင် လွတ်မြောက် မည် ဖြစ်ပါသည်။
ထိုအတွက်ကြောင့် အကြင်မည်သူမဆို ရှိသမျှ အန္တရာယ် အသွယ်သွယ်မှ လုံခြုံစေလိုလျှင် ၎င်းအနေဖြင့် အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် ၏ ခိုင်မာသည့် ခံတပ် တွင် ဝင်ရောက်သည် ဖြစ်ရန် အတွက် ဟဇရသ် အမီးရွလ် မိုအ်မေနီ အလီအစ်ဗင်နေအဘီ သွာလစ်ဗ် (အ.စ) ၏နောက် လိုက်ရပါမည်။အကယ်၍ အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် မလုပ် ပါစေနှင့် ။ တမင် ရှိုင်တွာန်၏ ထောက် ချောက်တွင် ပိတ်မိ မည်။ ပြီးနောက် နှုတ်ဖြင့် (( ကျွန်ုပ်သည်အလီ (အ.စ) ကို အချစ်ထားသူ ဖြစ်ပါသည်။)) ညာသံပေးပြီးယုံနှင့် မည် သည့် ရလာဒ်မျှ ရမည် မဟုတ်ချေ။
လက်တွေ့ မပါဘဲ နှုတ် တစ်ခု တည်းဖြင့် လုံလောက် ပါသလား?
یَاجَابِرُ لاَتَذْهَبَنَّ بِکَ الْمَذَاهِبُ حَسِبَ الرَّجُلُ اَنْ یَقُوْلَ احِبُّ عَلِیْاً وَّاَتَوَلاَّهُ ثُمَّ لاَیَکُوْنُ مَعَ ذٰلِکَ فِعَالاً فَلَوْ قَالَ اِنِّیْ اُحِبُّ رَسُولَ اللّٰه (ص) فَرَسُوْلُ اللّٰهِ خَیْرٌ مِنْ عَلِیّ ثُمَّ لاَیَتَّبِعُ سِیْرَتَهُ ولاَیَعْمَل بِسُنَّتهِ نَفَعَه حُبُّهُ اِیَّاهُ .فَاَتَقُوا اللّٰهَ وَاعْمَلُوْا لِمَا عِنْدَاللّٰهِ لَیْسَ بَیْنَ اللّٰهِ وَبَیْنَ اَحَدِ قَرَاَبةٌ اَحَبُّ الْعِبَادِ اِلٰی اللّٰهِ وَاَکْرَمُهُمْ عَلَیْهِ اَتقَیٰهُمْ وَاَعْمَلُهُمْ بِطَاعَتِهِ یَاجَابِرُ وَاللّٰهِ لاَ یَتَقَرَّبُ اِلٰی اللّٰهِ اِلاَّ بِطَاعَتِه وَمَا مَعَنَابَرَاءَ ةٌ مِنَ النارِ وَلاَ عَلٰی اللّٰه عَلٰی اَحَدٍ مِنْ حُجَّةٍ مَنْ کَانَ مُطِیْعاً لِلّٰهِ فَهُوَ لَنَا وَلِیُّ وَمَن کانَ للّٰهِ عَاصِیاً فَهُوَ لَنَاعَدُوٌ وَمَا تَنَالُ وَلاَ یَتُنَا اِلاَّ بِالْعَمَلِ وَالْوَر. (کتاب کافی ، ج ۲ ص ۶۰ حدیث ۳ )
ဟဇရသ် မိုဟမ္မဒ် ဘာကဲရ် (အ.စ) အနေဖြင့် ရှီအာ များ ၏ ဂုဏ် လက္ခဏာ များကို မိန့်ကြားပြီး မိန့်တော်မူ၏။ အို … ဂျဗေရ် တစ်ဦးတစ်ယောက်မှ ကျွန်ုပ် အလီ (အ.စ) ကို အချစ်ထားသူ ပါ။ ကျွန်ုပ် မောင်လာ ၏ ဝေလာယသ် ကိုရရှိထားသူပါ ဟု ပြောယုံဖြင့် လုံလောက် ပါသလား ? ဤ ကဲ့သို့ ညာသံပေးပြီးနောက် အဲဟ်လေ့ ဘိုက် (အ.စ) ၏ နောက် မလိုက်မည်။ အကယ်၍ တစ်ဦး တစ်ယောက် မှပြော မည်။ ဧကန် မုချ ကျွန်ုပ်သည် မဟာ တမန် တော်မြတ်ကြီး မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) ကို အချစ် ထားသူ ဖြစ်ပါသည်။ အကြောင်းမှာ တမန်တော်မြတ်သည် ဟဇရသ် အလီ (အ.စ) ထက် သာလွန် မြင့်မြတ် ပါသည်။ ပြီးနောက် ကျွန်ုပ်သည် မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) ၏ နောက်လိုက်ရှီအာ ဖြစ်ပါသည်။( ဤညာသံ ၏ အဖြေမှာ ဤသို့ဖြစ်ပြီး တမန်တော်မြတ် (ဆွ) ကိုယ်တိုင် မိမိ၏ အဲဟ်လေ့ဘိုက် (အ.စ) ၏နောက်လိုက်ဖို့ တိုက်တွန်း မိန့်ကြား ထားပါ သည်။ ) အံ့သြ စရာကောင်းသည်မှာ တမန် တော်မြတ် (ဆွ) ကို ချစ်ကြောင်း ညာသံ ပေးပြီး ကိုယ်တော်မြတ် (ဆွ) ၏ မြင့်မြတ် သည့် ဘဝတည် ဆောက်ပုံ အတိုင် ဘဝ မတည် ဆောက်မည်ဆိုလျှင် ၎င်းသည် စွန္နသ် တော်အတိုင်း လုပ်ဆောင်သူ မဟုတ်ချေ။ သီးသန့် ချစ် ကြောင်း ညာသံပေးယုံနှင့် မည်သည့် အကျိုး အမြတ်မှ ရရှိမည် မဟုတ်ချေ။
ပြီးနောက် အသင်သည် အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် သခင် အား ကြောက်ရွံ့ ပါလေ။ ထိုမှသာ အရှင်မြတ် ၏ ရဲဟ်မသ် တော် ကိုရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။ အကြောင်းမှာ အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ် နှင့် တစ်ဦးတစ်ယောက် ၏ အကြားတွင် မည်သည့် ဆွေမျိုး တော် ဆက်မှု မျှ မရှိချေ။ ။အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ် ၏ အနီးတွင် အနှစ် သက် တကာ အနှစ်သက်ဆုံး နှင့် အမြတ် နိုးတကာ အမြတ် ဆုံး ကျေးကျွန် မှာ အလုံးထက် အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် အားကြောက် ရွံ့သူဖြစ်ပြီး အားလုံး ထက်လက်တွေ့ အလုပ် လုပ်သူဖြစ်ပါသည်။
ပြီးခဲ့သည့် မိန့်မှာချက်နှင့် ဆက်စပ်၍ ဆက်လက် မိန့်တော် မူသည်။
یَاجَابِرُ وَاللّٰهِ لاَیَتَقَرَّبُ اِلٰی اللّٰهِ اِلاَّ بِطَاعَتِهِ وَمَا مَعَنَا بَرَاءَ ةٌ مِّنَ النَّارِ وَلاَعَلَی اللّٰهِ عَلٰی اَحَدٍ مِنْ حُجَّتِهِ مَنْ کَانَ مُطِیْعاً لِلّٰهِ فَهُوَ لَنَا وَلِیٌّ وَمِنَ کَانَ للّٰهِ عَاصِیاً فَهُوَ لَنَاعَدُوٌّ وَمَا تَنَالُ وَلاَ یَتُنَا اِلاَّ بِالْعَمَلِ وَالْوَرَعِ .(کتاب کافی)
အိုဂျဗေရ် … မြတ်အလ္လာဟ်၏ ကစမ် ၊ အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် ၏နီးကပ်မှု ကိုဆွတ်ခူးနိုင်ရန်အလိုဌာ ၎င်း၏ အမိန့်တော်များကို လက်တွေ့ လိုက်နာကျင့်သုံး မှု မပြုဘဲ မဖြစ်နိုင်ချေ။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့ ရှီအာ များ တွင် လိုက်နာမှု (ခ) နာခံမှု နှင့် ကျင့်သုံးမှု မရှိလျှင် ၎င်းအားအပြစ်မရှိသူဟု ဆိုပြီး ဂျဟန္နမ် (ငရဲဘုံ) မှ လွတ်မြောက် စေမည့် မည်သည့် အမိန့်စာ မှ ကျွန်ုပ်တို့ ထံတွင် မရှိချေ။ ကျနော် ရှီအာဖြစ်ပါသည်ဟု ပြောယုံ သက်သက်သည် အလ္လာဟ် ဟို အရှင်မြတ် ထံတော်တွင် လုံလောက်သည့် သက်သေ မဖြစ်ချေ။ (အကယ်၍ အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် သခင် လိုလား တော်မူလျှင်၎င်းအား အပြစ်ဒဏ် ပေး တော်မူ နိုင်ပါသည်။ အကြောင်း မှာ အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် ဘက်တော် မှ ရှီအာ ပြောယုံဖြင့် ခွင့်လွတ် ပေးမည်ဟု ကတိကဝတ် ၊မပြုထား သည့် အတွက် ကြောင့် ဖြစ်ပါ သည်။ မှတ်ချက်မှာ လိုက်နာခြင်းနှင့် ကျင့်သုံးခြင်း ဖြစ် ပါသည်။) သို့ဖြစ်ပါ၍ မည်သူ မဆို အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ်၏ အမိန့်များကို နားခံသူ ဖြစ်မည် ဆိုလျှင် ထိုသူသည် ကျွန်ုပ် ၏ ဝလီ (ချစ်မြတ်နိုးသူ) ဖြစ်ပါသည်။ ပြီးနောက် အကြင် မည်သူမဆို ဂိုနာဂါ (အပြစ်သမား) ဖြစ်မည် ဆိုလျှင် ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်၏ရန်သူ ဖြစ်ပါ သည်။ ပြီးနောက် ကျွန်ုပ်၏ ဝေလာယသ် သည် သီလသမာဓိ ရှိခြင်း နှင့် လက်တွေ့ လိုက်နာကျင့်သုံးခြင်း မှအပ မည်သည့် နည်း နှင့်မျှရရှိနိုင် မည် မဟုတ်ချေ။
အလာမာ မဂ်ျလေစီ (ရ.ဟ) ၏ အမြင်အရ သီလ၊သမာဓိ (သက္က်ဝါ) ၏ အမျိုးအစားများ
အလာမာမဂ်ျလေစီ (ရ.ဟ) မိန့်တော်မူပါသည်။ သီလ၊ သမာဓိ (သက္က်ဝါ) လေးမျိုးလေးစား ရှိပါသည်။
၁။ဝရအ်အေ သာဗေအီးန် ဖြစ်ပါသည်။၎င်း၏ အဓိပ္ပာယ်မှာ ဟရာမ်များ မှ ရှောင်ကြဉ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
၂။ဝရအ်ဆွာလေဟီးန် ဖြစ်ပါ သည်။ အဓိပ္ပာယ်မှာ သံသယ ဖြစ်စရာ အရာများမှ ရှောင်ကြဉ်ခြင်းဖြစ် ပါသည်။ထိုမှသာ ဟရာမ် မပြုမိရန် ဖြစ်ပါသည်။
၃။ဝရအ်မွတ်သ်သကီးန် ဖြစ်ပါသည်။ဆိုလိုသည့် အဓိပ္ပာယ် မှာမိုဘာဟ် အရာများ ကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ထိုမှသာ ဟရာမ် အရာ များကို မကျူးလွန်မိစေရန် ဖြစ်ပါသည်။သာဓက အားဖြင့် လူတွေ ၏ အခြေအနေ ကို အတင်းပြောမိမှ စိုးရိမ်၍ မမေးမြန်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။
၄။ဝရအ်စာလေကီးန် ဖြစ်ပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ အချည်း နှီး သော အလုပ်များ တွင် တန်ဖိုးရှိသည့် သက်တမ်းကို အသုံးဖြစ် မည်ကို စိုးရိမ်၍ အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် မဟုတ် သူ ဘက်မှ မျက်နှာကို လှည့်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။သို့သော်ဟရာမ်ဖြစ် ကျူးလွန် မည့်ကို ပူပင်စရာမရှိချေ။
အဲဟ်လေ့ဘိုက် (အ.စ) နှင့် အဲဟ်လေ့စွန္နသ် ဘက်မှ မြောက်များ စွာ သော သတင်းကောင်း ပေးသည် ရီဝါယသ် တော်များ ဟဇရသ် အလီ (အ.စ) ကို အချစ် ထားသူများ ထံသို့ ရောက်ရှိ ပါသည်။ ၎င်း ရီဝါယသ်တော်များ သည် အီမာန် သက်ဝင်ယုံကြည်သူများ ၏ မျှော်လင့် ချက် ကို အားကောင်း စေပါ သည်။ ဤအချစ်မေတ္တာ ၏ ကောင်းချီး မင်္ဂလာ ကြောင့် စိတ်အလို လိုက်ခြင်း နှင့် ရှိုင်တွာန် ၏ နောက်လိုက် ခြင်းမှ လုံးဝ ရှောင်ကြဉ် နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ အကြောင်း မှာ အကယ်၍ အကြင်သူ တစ်ဦးတစ်ယောက် သည် ပုဂ္ဂိုလ် ထူးပုဂ္ဂိုလ်မြတ် တစ်ဦးဦး အား ချစ်ခင်မြတ်နိုးမည်ဆိုလျှင် ၎င်း အချစ်မေတ္တာ ထားသူများ ကိုလည်း အချစ်မေတ္တာ ထားရန် လိုအပ်ပါ သည်။ ၎င်း၏ ရန်သူ များကို ရန်သူ အဖြစ် သတ်မှတ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ရှိုင်တွာန် ကိုချစ်ခြင်း ရှိုင်တွာန်ကို မိတ်ဖွဲ့ခြင်း နှင့် စိတ်အလို ဆန္ဒများ ကို နောက်လိုက်ခြင်း သည် အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် သခင်အား ခဝပ်ကိုး ကွယ်ခြင်း နှင့် အဲဟ်လေ့ဘိုက် (အ.စ) ကို ချစ်မြတ်နိုးခြင်း အတွက် အတား အဆီး ဖြစ်စေပါသည်။ အင်န်ရှာအလ္လာဟ် ဟဇရသ် အလီ (အ.စ) အား ချစ်မြတ်နိုးသူများ သည် ကိုယ်တော် ၏ အချစ်မေတ္တာ ၏ မင်္ဂလာကြောင့် ရှိုင်တွာန် ၏ လမ်းနှင့် ဝေးကွာမည် ဖြစ်ပါမည်။ ဤအတွက်ကြောင့် သိရှိရ သည်မှာ အချစ် မေတ္တာ သည်လည်း ဝေလာယသ် အတိုင်း ဂိုနာဟ် (အပြစ်) ကျူးလွန်ဖို့ သတ္တိကို တားမြစ်ပေးပါသည်။ တစ်နည်းဆိုရလျှင် ဆန့်ကျင်ဘက် ပြုလုပ်ပေးပါသည်။ အကယ်၍ စစ်မှန်သည့် မှန်ကန် သည့် အချစ်မေတ္တာ ဖြစ်မည် ဆိုလျှင် စိတ် အလိုဆန္ဒ ၏ အနီးအနားတွင် လှည့်နေမည်မဟုတ်ချေ။ (လုပ်မည် မဟုတ်ချေ။) ဤ ဆိုလိုချက်ကို ထင်ရှား စေရန် အတွက် အချို့ ဟဒီးစ် တို လေးများ ဘက် သို့ ညွှန်ပြမည်ဖြစ်ပါသည်။
အချစ်မေတ္တာသည် မနုဿ လူသား ကို ကြံ့ကြံ့ခံ စေပါသည်
قَالَ الْبَاقِرُ (ع) مَاثَبَتَ اللّٰهُ حُبَّ عَلِّیٍ فِی قَلْبِ اَحَدٍ فَزَلَّتْ لَهُ القَدَمُ اِلاَّ ثَبتَّهَا اللّٰهُ وَثَبَّتَ لَه قَدَمٌ اُخریٰ.(بحارالانوار)
ဟဇရသ် အေမာမ် မိုဟမ္မဒ် ဘာကဲရ် (အ.စ) မိန့်တော်မူ ၏။ အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် သည် ဟဇရသ် အလီ (အ.စ) ၏ အချစ် မေတ္တာ ကို ထို ပုဂ္ဂိုလ် ၏ နှလုံးသားတွင် နေရာ ပေးတော်မူ သည်။ ၎င်း၏ ခြေလှမ်း သည် ဂိုနာဟ် အတွက် ချော်မည်မဟုတ်ချေ။ တစ်နည်း အားဖြင့် အလ္လာဟ် ဟိုအရှင်မြတ် သည် ၎င်းအား ကယ်တင် တော်မူပြီး ၎င်းအတွင်း ကြံ့ခိုင်မှု ကို ပေးသနားတော် မူလေ ၏။ ပြီးနောက် ဒုတိယ လှမ်းမည့် ခြေလှမ်းကို လည်း ခိုင်ခံ့ စေတော်မူပါသည်။
ဂျနာဗေ ဂျာဗေရ် အန်ဆွာရီ (ရ.ဟ) ၏ သေတမ်းစာ
اِنْ تَزَلَّ لَهُمْ قَدَمٌ بِکَثْرَةِ ذُنُوْبِهِمْ ثَبَتَتْ لَهُمْ اُخْرَیٰ بِمَحَبَّهِمْ .
(سفینة البحار، ج ا )
ဂျနာဗေ ဂျာဗေရ် အန်ဆွာရီ (ရ.ဟ)သည် မိမိ ၏ သေတမ်းစာ တွင် အသီးယဟ် ကူဖီ အား ပြောကြားသည်မှာ - အကယ်၍ အဲလ်လေ့ဘိုက် (အ.စ) ကို အချစ်ထားသူများ ၏ ပထမ ခြေလှမ်းသည် ဂိုနာဟ် များ အများ အပြား ကျူးလွန် သည့် အတွက် ကြောင့် တုံ့လှုပ် ခဲ့မည်ဆိုလျှင် အဲဟ်လေ့ဘိုက် (အ.စ) ၏ အချစ်ကြောင့် ဒုတိယ ခြေလှမ်းလှမ်းနိုင်ရန် အတွက် စွမ်း အား ကို အလ္လာဟ် အရှင်မြတ် ပေးသနား တော်မူမည် ဖြစ်ပါ သည်။
ဟဇရသ်အလီ (အ.စ) အား အချစ်ထားသူများ အတွက် ကောင်းကင်တမန်များ ၏ အစ်သေဂ်ဖာရ် ပြုပေးမှု
မြောက်များ စွာသော ရီဝါယသ်တော်များ အရ အဲဟ်လေ့ ဘိုက် (အ.စ) အား အချစ်ထား သူများ အတွက် အစ်သေဂ် ဖာရ် ပြုပေးကြောင်း အထောက်အထား အခိုင် အလုံ ရှိပါ သည်။ ဤအတွက်ကြောင့် ဗေဟာရွလ် အန်နဝါရ် ကျမ်း တွင် အဲဟ်လေ့ စွန္နသ် ထံ မှ ဤ ရီဝါယသ် တော် အား တင်ပြ ထားပါသည်။
عَنْ اَنَسٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص)قَال خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ نُوْرِ وَجْهِ عَلیِّ بْنِ اَبِیْطَالِب سَبْعِیْنَ اَلفَ مَلَکٍ یَسْتَغْفِرُوْنَ لَه وَلِمُحِبِّیْهِ اِلٰی یَوْمِ الْقِیَامَةِ .
အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ် သခင်သည် ဟဇရသ် အလီ (အ.စ) ၏ နူးရ် မှ တဆင့် ကောင်းကင်တမန် ပေါင်း ၇ သောင်း ကို ဖန်ဆင်း တော်မူပါသည်။ ဤ ကောင်းကင်တမန် များ သည် ဟဇရသ် အလီ (အ.စ) နှင့် ကိုယ်တော် အား အချစ်ထားသူများ အတွက် ကေယာ မသ် နေ့ ထိတိုင် အောင် အစ်သေဂ်ဖာရ် ပြု ပေးနေကြပါသည်။
ဟဇရသ်အလီ (အ.စ) ၏ အချစ်သည် ဂိုနာဟ် များကို လောင်းကျွမ်း စေပါသည်
ဤအကြောင်း အရာ နှင့်ပတ်သက်ပြီး ရီဝါယသ် တော် အတည်အလင်း လာရှိပါသည်။ ဟဇရသ် အလီ (အ.စ) အား ချစ်ခြင်းသည် ဂိုနာဟ်များကို ချေမှုန်း ဖြစ်ပါသည်။ ဤအတွက်ကြောင့် ဗေဟာရွလ် အန်နဝါရ်ကျမ်း တွင် ရီဝါယသ်တော် အား အစ်ဗ်နေ အဘာစ် မှ ကိုယ်တော်မြတ် မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) ထံမှ ဆင့်ပြန် ထားပါ သည်။
حُبُّ عَلِیُّ بْنُ اَبِیْ طَالَبٍ یَأْکُلُ الذُّنُوْبَ کَمَا تَاْکُلُ النَّارُ الْحَطَبَ.
အဓိပ္ပာယ်။ ။ ဟဇရသ် အလီ (အ.စ) ၏ အချစ် သည် ဂိုနာဟ် အပြစ် များ ကို မီးမှ ထင်းကို လောင်းကျွမ်း စေသကဲ့သို့ လောင်းကျွမ်း စေ ပါသည်။
رذل سواد معاصی بروں برد مهرش
چنانکه ماہ برد ظلمت ِشب ِ دیجور
زحبّ او ست بروز جزانه از طاعت
အဓိပ္ပာယ် ။ ။ ဟဇရသ်အလီ (အ.စ) ၏ အချစ် သည် နှလုံးသား ၏ မည်းညစ်မှု ကို လပြည့်ညသည် မည်းမှောက်နေမှုကို ပျောက်စေ သကဲ့သို့ ပျောက်စေပါသည်။ ကေယာမသ် နေ့ တွင် ဟဇရသ် အလီ (အ.စ) ၏ အချစ်ကြောင့် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာ ခွင့် ရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။ အမိန့် နာခံမှု နှင့် အေဗာဒသ် (ခဝပ်ကိုးကွယ်မှု) ကြောင့် ရရှိသည်မဟုတ်ချေ။ သို့သော်ဤ အချစ်မေတ္တာ နှင့်အတူ အမြဲ ရှိနေမည့် ဂဖူးရ်၊ရဟီးမ် အရှင် ၏ မျှော်လင့်ချက် ကိုလည်း နှလုံးသား တွင် ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ ( ဆိုလိုသည်မှာ အချစ် မေတ္တာ ကြောင့် ရွှင်လန်းတက်ကြွပြီး အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် အား မမေ့ ရန် ဖြစ်ပါသည်။)
ပူပင်သောကများ နှင့် ဘေးဥပဒ်များသည် အပြစ်များကို ပျက်စီး စေပါသည်။
ဤအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်ပြီး ရီဝါယသ် တော် လာရှိပါသည်။ အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ် သခင်သည် အဲဟ်လေ့ဘိုက် (အ.စ) အား အချစ်ထားသည့် အပြစ်သမား များကို လောကတွင် ဘေးဥပဒ် မျိုးစုံ တွင် ကြုံတွေ့ စေပါသည်။ ထိုမှသာ မသေခင် အပြစ်များမှ သန့်စင်သွားရန် အတွက် ဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ အပြစ် များသည်ဆိုလျှင် အသက်ငင်နေချိန် အခက်အခဲ ဒုက္ခ ဖြင့် ၎င်းထက်ပို၍ အပြစ်များ လျှင် ဗရ်ဇက်ခ် မှ စ၍ မဲဟ်ရှရ် အထိ အဇါးဗ် (ပြစ်ဒဏ်) ချ ပြီး သန့်စင်စေတော်မူပါသည်။ ဆိုပါစို့ ။၎င်း သည် မည်မျှအထိ ဂိုနာ အပြစ်များသည် ဆိုလျှင် မဲဟ်ရှရ် ကွင်းပြင်အထိ ၎င်း၏ဂိုနာ အပြစ်များ မကုန်သေးမသန့်သေးပဲ ကျန်နေမည်ဆိုခွင့်လွတ်ခြင်း မခံရသေးမည်ဆိုလျှင် ၎င်းအား ဂျဟန္နမ် ၏မီး နှင့် ပြစ်ဒဏ်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဂိုနာဟ် အပြစ်ငရဲများ မှ ကင်းစင် သန့်ရှင်း သွားပြီးနောက် ၎င်း အား ဂျဟန္နမ် မှ ထုတ် တော်မူခြင်းခံရပါမည်။ ပြီး ၎င်းပုဂ္ဂိုလ် ၏ နှလုံးသား တွင် အဲဟ်လေ့ဘိုက် (အ.စ)၏ အချစ်နှင့်အီမာန် အား အနည်း ငယ်မျှပင် ရှိမည်ဆိုလျှင် ၎င်းသည် ဂျဟန္နမ် (ခ) ငရဲဘုံတွင် နေရ မည် မဟုတ်ချေ။ အကြောင်းမှာထာဝရ ပြစ်ဒဏ်သည် ကာဖေရ်များ နှင့် ကိုယ်တော်မြတ် (ဆွ) ၏ အဲဟ်လေ့ဘိုက်(အ.စ) ၏ ရန်သူများ အတွက်သာ ဖြစ်ပါသည်။
စူရဟ်ဗိုင်ယေနဟ် ၊ အာယသ်တော်အမှတ် ၇
အောကျတိုဘာ ၈, ၂၀၂၁ - ၁၁:၅၅ ညနေ